XOG RASMI AH:- Guddiga doorashada oo go’aan ka gaaray wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG RASMI AH:- Guddiga doorashada oo go’aan ka gaaray wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya
Warar hoose oo naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in guddiga doorashada maamulka Hirshabeele ay go’aan kama dambeys ah ku gaareen in liiska musharixiinta laga saaro wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xasan Nuux.
Wasiirka oo ka mid ah xubnaha maamulka Hirshabeele ku tartamayo Aqalka hoose ee barlamaanka Soomaaliya ayaa lagu soo eedeeyay in ilaaladiisa ay ku lug lahaayeen is-rasaasayn habeenkii xalay ka dhacday xarunta ay ka socotay doorashada oo ku taala magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe.
Is-rasaaseyntaasi ayaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen 6 qof oo uu ku jiro wiil uu dhalay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeele Cali C/laahi (Guudlaawe), kadib markii rasaas wiifto ah ay ugu tagtay guri uu degan yahay oo ku yaala meel aan sidaasi uga fogeyn xarunta ay ka socotay doorashada.
Guddiga doorashadda maamulka Hirshabeele ayaa la sheegayaa inay gebi ahaan hakiyeen doorashadda Aqalka hoose, waxaana haatan la furay baaritaan la xiriira iska-horimaadkaasi oo ay ku lug lahaayeen ilaalo kala taabacsanaa wasiir Nuux iyo musharixii isaga la tartaamaya.
Wasiir Nuux ayaa la sheegay inuu rabshado ka dhex abuuray xarunta ay ka socotay cod-bixinta musharixiinta Hirshabeele ee Aqalka hoose baarlamaanka Soomaaliya, kadib markii uu arkay in looga cod badan yahay doorashadda oo ay ku tartamayeen musharax Axmed Sheekh Nuur Timacadde.
Inkastoo aysan ahayn markii ugu horeeysay uu musharax dagaal ka kiciyo goobaha aydoorashadda ka socoto ayaa hadana is-rasaaseyntii shalay waxay keentay in guddiga uu arrintaan kulan ka yeesho islamarkaana la sugaayo in go’aano cusub laga soo saaro in musharixii doorashada ka qeyb-galaayo aanay goobaha doorashada la imaanin rag hubeysan oo markii musharaxaasi laga guuleysto dhibaato ka bilaaba goobahaas.